PSG oo si wayn u beenisay wararka la xiriirinaya wiilka Real Madrid James Rodriguez – Gool FM
PSG oo si wayn u beenisay wararka la xiriirinaya wiilka Real Madrid James Rodriguez
Byare July 5, 2016
(Paris) 05 Luulyo 2016. Madaxwanaha Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ayaa dafiray wararka soo jeedinaya in kooxdiisa ay wada hadalo kula jirto Real Madrid oo ku aadan saxiixa James Rodriguez.
24-jirka ayaa u dul qaatay xilli ciyaareed adag uu ku soo hoos qaatay Rafael Benitez iyo Zinedine Zidane, qeyb ahaan sababo dhaawac waxaana marar badan lala xiriiriyay inuu ka socdo gegada Santiago Bernabeu.
Man United ayaa lala xiriirinayay iyo sidoo kale PSG ooba la wariyay inay wada hadalo la yeelatay Real Madrid oo ku aadan saxiixa wiilka reer Colombia,
Yeelkeede, Al-Khelaifi ayaa caddeeyay inaysan jirin wax ka saxan sheekada la isla dhex qaadayo.
“Run ma ahan inaan kol horeba la hadalnay James,”. Madaxwaynaha PSG ayaa sidaa ka yiri shir jaraa’id.
“Lama aynaan xiririn James mana la hadlin Real Madrid, mana jiraan xiriir aan la sameynay qof kale.”.
James Rodriguez ayaa heshiiska uu kula joogo Los Blancos waxa uu ka dhacayaa bisha June ee 2020.
PSG oo si xoogan isku qalabeynaysa ayaa durba la soo wareegtay saddex laacib oo cusub Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak iyo Thomas Meunier
Lionel Messi, Hazard, Neymar, Havi, Iniesta, Mourinho, Capello xitaa Diego Maradon iyo magacyo kale oo waa wayn…(Samuel Eto’o oo xiddigo badan isku balamiyay, muxuu yahay kulanka, halkuuse ka dhacayaa?)